Roobab ka da’ay Qaybo ka mida Dhulkii Abaarta ba’an ay ka Jirtay (Faah-faahin) - Hablaha Media Network
Roobab ka da’ay Qaybo ka mida Dhulkii Abaarta ba’an ay ka Jirtay (Faah-faahin)
HMN:- Iyadoo Lixdiii bilood ee u danbeeyey ay ka jireen guud ahaan dalka Somalia abaaro ba’an isla markana ay ka dheceen abaarihi ugu darnaa ee ka dhaca Somalia mudo 40 sano wax ku badan ayaa waxaa 24 kii saac ee u danbeeyey ay kacurtay Roobabka Guga , iyadoo ay ka da’een magaalooyinka waawayn qaarkood sida Boorame , Boosaaso , Hargesia Ceerigaabo iyo degaano kale ay ka da’een Hoglo biyo dhacay.
Hoglahaan oo biyo dhigay magaalooyinkaa ayaa waxaa ay ahaayeen kuwo ay diirsadeen dadka iyo Xoolaha , waxaaana iminka laga dareemayaa deegaanada badan oo ka tisarn Waqooyiga Somalia , Puntland jawi roobaab iyo daruuro Irmaan kuwaas oo wata neecowda Saxansaxada .
Galabnimadii maanta waxaa ku Hooray magaalda Ceerigaabo ee gobolka Sanaag Hoglo lagu diirsaday , waxaan ay biyo dhigeen Buuraha Daallo , Roobabkan ayaa ku aadaya xilli ay jiraan baahi ballaadhan oo baaxadeedu aad u wayn tahay . iyadoo Foostada Booyada macaan ayaa iminka maraysa in ka badan 12 Dollar . ama lacag u dhiganta 250 shilin Soomaali .
Dhinaca kale magaalada Buuhoodle deegaano Hoos yimaada oo ay ka mid yihiin Ceegaag, Gol-jano iyo Laan-masley ayaa lagu soo waramayaa inay Da’een Roobabku.
Cimilada oo maanta ahayd mid aad u saraysa dhanka Kulaylka ayaa waxaa ay sheegayaan Saadaasha Cimilada in maalmaha soo socda ay ka di’i doonaan beelo badan oo ka mida Somalia Roobab kala duwan .